Oduu diinaggee daldalaafi gabaa
Admin - Oct 18, 2017
Admin - Feb 15, 2017 0
Investimentiin biyya-alaa irraa gara Itoophiyaatti seenu baatii jahan darban keessa dhibbeentaa digadamaan (%20) gadi bu'uun isaa beekame. Itoophiyaan baatii 6 dabran keessaa sochii investimentii...
Iyyannoon hojii (CV’n) dalagaa argachuudhaaf nama gargaaru qabxiilee sagal guutuu qaba
Admin - Feb 7, 2017 2
Namoonni kan barataniif waan hedduuf. Dalagaa argachuufi woraqaa isaanitti dhimma bayanii jireenya fooyyeffachuun sababa isa tokko. Shakkii tokkoon alatti, baratanii dalagaa argatanii uf, maatiifi...
Hojjadhee naaf hindabru jedhaa cinqamtuu?Barnoonnis naaf hinta’u jedhaa jeeqamtuu? Namoonni dalagaanis ta’ee barnootaan milkaayan sanyii ‘jiinii’ addaa qabu jettanii amantuu? Irra deddeebi’aa yaadaa. Maaliif...
Mootummaan Itoophiyaa konkolaataa biya alaatii seenan irratti qaraxa hanga %300 gayu kan gatu taúun isaa beekame. Qaraxni hangas guddatu kuni gatiin konkolaataa biyyattii keessatti...
Fincila ummataa yeroo woggaa tokkoo oliif geggeeffamaa tureen wolqabatee seektariin turizimii Itoophiyaa haalaan jeeqamuun isaa beekame. Balaan seektarii turizimii biyyattii irra gaye kuni mootummaa...
Maqaa investimentiin mootummaan Woyyaanee ummata buqqisaa, garuu investaroota biyyaa fi biyya alaa albuudaa fi lafaan badhaasaati kan ture. Amma garuu, mootummaan Woyyaanee quba miilaan...
Bulchiinsa naannoo Gambeellaatti investaroonni 100 lafa heektaara kuma heddutti laakkawamu maqaa investimentiin fudhatan akka deebisan gaafataman. Murtee kana irra gayuu isatiif sababni mootummaan naannichaa...
Fira - Feb 29, 2016 0
Seera taaksii haarawa mootummaan Gurraandhala 22, 2016 hujii irra oolche mormuudhaan taaksiin magaalaa Finfinnee guyyaa har’aa tankaarfii hujii dhaabuu fudhataniiru. Gatiin boba'aas akka hir'atu...
Naannoon Oromiyaa dhaabbilee albuuda baasuu irratti bobba'an irraa woggaa tokko qofa keessatti (bara 2013) qarshii miliyoona 427 argachuun isiirra ture dhabuun isii ibsame. Kana...
Gurgurtaa caalbaasii lafa magaalaa Finfinnee tibbana geggeeffameen lafti meetir iskuweerii 242 qarshii miliyoona 86’tti gurguramuun isii beekame. Lafti nuusa heektaaraa hin caalle tuni kan...